Antigua sy Barbuda Citizenship avy amin'i Antigua Hermitage Bay Share
Ny fahazoana zara amin'ny hôtely hahazoana zom-pirenenan'i Antigua sy Barbuda
TADIDIO IZAO REHETRA INDROSITRA REHETRA, 5-STAR, ATAON'NY CARIBBEAN
Toeram-pisakafoanana fivarotana lehibe iray no miorina eo ambonin'ny tehezan-trondro miafina, izay hamenoan'ny rivotra ny hanitry ny frangipani, ny feon'ny onja mihodinkodina manamorona ny morontsiraka anao, ary traikefa natao hamelomana, hanjaka ary hampitony ny fanahy miandry. Tongasoa eto amin'ny Hermitage Bay.
Miorina amin'ny zoro mangina any Antigua ary manome trano honenana, fahasalamana sy fisakafoanana mihaja, mankalaza ny fiadanam-po, ny hafanana ary ny hatsaran-tarehy voajanahary mampiavaka an'i Karaiba ny trano fandraisam-bahiny noforoninay.
Raha ny fisakafoanana no resahina, dia mamorona fotoana hijanona miaraka aminao mandrakizay izahay rehetra. Ary miaraka amin'ny akamaroan'ny akora ampiasainay ao amin'ny zaridaina legioma manokana, azonao antoka ny tena tsiron'ny Karaiba.